Mavhesi makumi maviri eVhesi Zvese pamusoro Penyasha | MINYENGETERO MARI
musha Mavhesi eBhaibheri Mavhesi makumi maviri eVhesi Zvese pamusoro Penyasha
Mavhesi makumi maviri eVhesi Zvese pamusoro Penyasha
1 VAKorinde 15:10:
10 Asi nenyasha dzaMwari ndiri zvandiri, uyeenyasha dzake dzakaiswa kwandiri hadzina kuva pasina; asi ndakabata zvikuru kupfuura ivo vese, zvakadaro handisi ini, asi nyasha dzaMwari dzakange dziva neni.
nyasha inyasha dzaMwari dzisina kukodzera. Isu tinoponeswa nenyasha, tinofamba nekutenda, asi rutendo rwedu rwakavakirwa munyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu. Hapana munhu anogona kunzi akarurama pamberi paMwari nekuteerera kwake kana nemabasa ake, tinoruramiswa zvakasununguka nenyasha dzaMwari kuburikidza nekutenda kwedu muna Jesu Kristu. Hazvina kunaka here izvi? Nhasi tichave tichitarisa kumusoro kwemakumi maviri emaBhaibheri mavhesi pamusoro penyasha, paunenge uchiverenga aya mavhesi ebhaibheri, rega shoko renyasha dzaMwari rigare zvakapfuma mumoyo mako nhasi muzita raJesu. Mwari akuropafadze iwe paunenge uchiverenga.
1. Esiteri 2: 16-17:
Naizvozvo Esiteri akaiswa kuna mambo Ahashivheroshi mumba make, nomwedzi wegumi, uri mwedzi weTebheti, pagore rechinomwe rokubata kwake ushe. 16 Zvino mambo akada Esiteri kupfuura vakadzi vese, akanzwirwa tsitsi nenyasha naye pamberi pake kupfuura mhandara dzose; Naizvozvo akaisa korona youmusoro pamusoro wake, akamuita vahosi panzvimbo yaVhashiti.
2. 2 Vakorinde 12: 8-9:
8 Nekuda kwechinhu ichi, ndakakumbirisa Ishe katatu kuti chibve kwandiri. 9 Zvino akati kwandiri: Nyasha dzangu dzakakukwanira, nekuti simba rangu rinozadziswa muutera. Naizvozvo ndinonyanya kufara kuti ndinorumbidza kushaya simba rangu, kuti simba raKristu rive pamusoro pangu.
3. VaRoma 3: 20-24:
20 Naizvozvo kubudikidza nemabasa emutemo, hakuna nyama inganzi inotongwa pamberi pake, nekuti zvivi zvinoziviswa nemutemo. 21 Asi zvino kururama kwaMwari kunze kwemutemo kunoratidzwa, kuchipupurwa nemurairo nevaporofita; 22 Kunyange kururama kwaMwari nerutendo rwaJesu Kristu kune vose nepamusoro pevose vanotenda; nekuti hapana musiyano; 23 Nokuti vanhu vose vakatadza, vakasasvika pakubwinya kwaMwari; 24 achiruramiswa nenyasha dzake kubudikidza nerudzikunuro ruri muna Kristu Jesu:
4. Johane 1: 14:
14Iye Shoko rakaitwa nyama, uye rakagara pakati pedu, (uye takaona kubwinya kwake, kubwinya sekwewakaberekwa mumwe chete waBaba,) azere nenyasha uye nechokwadi.
5. Varoma1: 1-5:
1 Pauro, muranda waJesu Kristu, akadanwa kuti ave muapositori, akapatsanurwa kuvhangeri yaMwari, 2 (yaakavimbisa kare nevaporofita vake mumagwaro matsvene,) 3 maererano neMwanakomana wake Jesu Kristu Ishe wedu, vembeu yaDhavhidhi panyama; 4 uye ndakaziviswa kuva Mwanakomana waMwari nesimba, pamwe nemweya weutsvene, nekumuka kuvakafa: 5 watakagamuchira naye tsitsi nevuapositori, kuti kuve kuteerera kwerutendo pakati pendudzi dzose, kuzita rake.
Mabasa 6: 6:
8 Uye Stefani, azere nerutendo nesimba, akaita zvishamiso zvikuru nezvishamiso pakati pevanhu.
7. VaEfeso 4: 7:
7 Asi kune umwe neumwe wedu kwakapihwa nyasha maererano nechiyero chechipo chaKristu.
8. Vaheberi 13: 9:
9 Usatakurwa nedzidziso dzakasiyana siyana. Nekuti chinhu chakanaka kuti moyo usimbiswe nenyasha; kwete nezvikafu, zvisina kubatsira vaigaramo.
9 VaEfeso 2: 8-9:
8 Nekuti nenyasha makaponeswa nerutendo; uye izvo hazvibvi pamuri, icho chipo chaMwari: 9 kwete pamabasa, kuti chero munhu arege kuzvirumbidza.
10. 2 Pita 1:2:
2 Nyasha norugare ngazviwedzere kwamuri kubudikidza neruzivo rwaMwari uye rwaJesu Ishe wedu.
11. Vaheberi 4: 16:
12 1 pita 4:10:
10 Sezvo munhu wese akagamuchira chipo, shumiranaiwo ichocho kune sevatariri vakanaka venyasha zhinji dzaMwari.
13. Jakobho 4:6:
6 Asi anopa nyasha dzakawanda. Naizvozvo unoti: Mwari unopikisa vanozvikudza, asi unopa nyasha vanozvininipisa.
14. 2 Vakorinde 8: 7:
7 Naizvozvo, sezvamakawanza pazvinhu zvese, mukutenda, pakutaura, uye paruzivo, nepakushingairira kose, uye nerudo rwako kwatiri, ona kuti muwanze munyasha idzi.
Tito 15: 2:
11 Nekuti nyasha dzaMwari dzinounza ruponeso dzakaonekwa kune vese,
16. VaRoma 6: 14:
14 Nekuti zvivi hazvingazovi nesimba pamusoro pako, nekuti hausi pasi pemutemo, asi pasi penyasha.
17. VaRoma 11: 6:
6 Uye kana nenyasha, saka hazvichisiri zvemabasa; kana zvisakadaro, inyasha hadzichiri nyasha. Asi kana zviri zvemabasa, saka hazvisirizve nyasha; kana zvikasadaro basa harisisiri basa.
Mabasa 18: 15:
11 Asi isu tinotenda kuti nenyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu, isu tinoponeswa, sekwavo.
19. 2 Vakorinde 8: 9:
9 Nekuti munoziva nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu, kuti kunyange akange akafuma, asi nekuda kwako wakava murombo, kuti kubudikidza nourombo hwake mufume.
20. 2 Timotio 1:9:
9 iye wakatiponesa, akatidana nekudana kutsvene, kwete maererano nemabasa edu, asi sekuda kwake uye nenyasha, zvatakapiwa muna Kristu Jesu nyika isati yatanga.
Previous nyayaNhaurwa makumi maviri dzeMavhesi eBhaibheri Nezve mufaro
inoteveraNhaurwa dzegumi dzeMavhesi nezveKuyedzwa kjv
Yusuph Chikunguru 26, 2021 Na8: 56 pm
Bwana yesu apewe sifa, ini ndinopenda mafundisho mune zvinofadza zvikuru nekugadzira pamusoro pekuziva Namna vanhu Anavyotupa Neema nekuzunza
Chirevo Chine Simba Pakukundikana